Ungasifumana njani Windows 10 iilayisensi ezisuka kwi-10,39 euro | Iindaba zeGajethi
Kunqabile kwaye kuyaxhaphaka ukubhenela ekuthengeni ngokwasemzimbeni isoftware kunye nemidlalo yevidiyo kwiminyaka yedijithali, iilayisensi ze IWindows, iMicrosoft Office kunye nemidlalo yethu yevidiyo Baya ngokuya beyimveliso yedijithali ukuba bayifumane, njengoko kwenzekile ngomculo kunye nomxholo wokumanyelwayo ngokubonga kumaqonga anjengeSpotify kunye neNetflix.
Yiyo loo nto ababoneleli bedijithali be "izitshixo" okanye iilayisensi zesoftware bechuma, ngenxa yoko bekwazi ukubonelela ngesiqulatho sibaluleke kakhulu ekusebenzeni kwezixhobo zethu ngamaxabiso asezantsi kakhulu kunesiqhelo. Hlala nathi kwaye ufumane ukuba ungazifumana njani Windows 10 iilayisensi ezivela kwi-10,39 euro, kunye nemidlalo yevidiyo kunye neMicrosoft Office.
Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba uya kuba nakho ukusebenzisa isaphulelo se-20% kwinto oyithengileyo usebenzisa ikhowudi "GET" xa uthenga. Umzekelo sisoftware esikushiya ngezantsi:
IMicrosoft Windows 10 Pro ukusuka kwi-10,39 euro.
Kodwa ayisiyiyo loo nto ukuma kuphela, kwaye siza kubanakho ukuthatha ithuba lokuphehlelelwa kweemveliso ezibizayo neziyimfuneko ezifana Microsoft OfficeKwakhona kumaxabiso ubungenakutshatisa umbulelo kuwo Iindlela ze-urcd. Le webhusayithi inesandla esihle semidlalo yevidiyo efumanekayo kuzo zombini i-Steam kunye namanye amaqonga afumaneka ngokuthe ngqo ukukhuphela.
IMicrosoft Office 2016 yoBuchule kwi-26,76 euro.
IMicrosoft Office 2019 yoBuchule kwi-37,99 euro.
Yiyo ke indlela elula ngayo ukuba uya kukwazi njani ukugcina kakhulu ukufumana iilayisensi zeWindows, nayiphi na inkqubo yeMicrosoft kunye nomxholo wesoftware, Kutheni uhlawula ngaphezulu xa uhlawula kancinci? Ukuba, umzekelo, ulahlekelwe yiWindows emva kwefomathi, okanye ufuna nje ukufaka iPC entsha ngesoftware efanelekileyo yokufunda kunye nokusebenza, ngaphandle kwamathandabuzo le webhusayithi yenye yeendlela ezizezinye onokuthi ube nakho fumana kuyo yonke i-intanethi kunye neziqinisekiso, ungazihlawula zombini nge-PayPal nangekhadi letyala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ungayifumana njani Windows 10 iilayisensi ezivela kwi-10,39 euro
Ungazikhuphela njani iividiyo kwiVimeo